नागा बाबाको दर्शन – DK
Home / समाचार / नागा बाबाको दर्शन
By digitalkhabar on March 2, 2019
‘सनातन धर्मका संरक्षक’
यौनांग देखाएर बसेता पनि उनीहरुमा काम बासना, आशक्ति र यौन चाहना हुँदैन। साधनाबाट उनीहरुको काम बासना मरिसकेको हुन्छ।
नागा बाबाहरू को हुन्, यिनको महत्व के छ ?
शैब सम्प्रदाय अन्तर्गत पर्छन नागा बाबाहरू। उनीहरु विभिन्न तीर्थ वा धार्मिकस्थल घुमेर गुजारा चलाउँछन्। शिवरात्रीमा पशुपतिनाथ आएका उनीहरु यताबाट गंगासागरतिर लाग्छन्। सनातन हिन्दु धर्ममा नागा बाबाहरुलाई एक किसिमका सैन्य शक्ति जस्तै मानिन्छ। अरु सनातन धर्मको संरक्षकका रुपमा उनीहरुले मान्यता पाएका छन्।
नांगै बस्दा समाजमा विकृति फैलिँदैन र ?
नागा बाबा भन्नेवित्तिकै सधैं नांगै हिँड्छन् भन्ने सम्झनु हुँदैन। पशुपतिनाथको कुरा गर्दा उनीहरु शिवरात्रीको केही दिन अगाडिदेखि पशुपतिनाथको प्रांगणमा मात्रै नांगै बस्छन्। आफ्नो अनुशासनमा बस्छन्। यो त पुरानो संस्कार र संस्कृति हो। बाहिर सडकमा नांगै हिँड्दैनन्। मन्दिर बाहिर नांगै हिँडेमा अनुशासन भंग गरेको ठर्हछ।
कतिपयले उनीहरूलाई निषेध गर्नु पर्छ भन्छन् नि ?
जब शिवरात्री आउँछ नागा बाबालाई निषेध गर्नु पर्छ भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ। खासमा नबुझेर बिरोधमा आवाज उठ्ने गरेको हो। यौनांग देखाएर बसेता पनि उनीहरुमा काम बासना, आशक्ति र यौन चाहना हुँदैन। साधनाबाट उनीहरुको काम बासना मरिसकेको हुन्छ। देख्नमा यौनांग देखिन्छ तर त्यसको औचित्य हुँदैन। उनीहरु मध्ये केहीले यौनाग प्रयोग गरेर काठ वा ढुंगा उचालेर खेला देखाउँछन्। यसरी हेर्दा त्यो मासुको डल्लो जस्तो मात्रै देखिन्छ।
नागा बाबाहरूको सम्मान परम्परा कति पुरानो हो ?
पशुपतिनाथलाई भारतमा रहेका केदारनाथको शिरोभाग मानिन्छ। त्यस हिसाबले धेरै तिर्थालु आउँछन्। नागाबाबाहरु पशुपतिनाथका अनुयायी हुन्। उनीहरुलाई शिवरात्रीमा स्वागत तथा विदाई गर्ने सदियौं पुरानो परम्परा हो। पशुपति प्रांगणमा बसुञ्जेल मुल मन्दिर बाहिरका हनुमानजी, बुढानिलकण्ठ, गरुडनारायणमा तीर्थालुले चढाएका भेटी पनि नागा बाबाले नै लिने चलन छ।
Related ItemsBabaBusinessDigital KhabarFestivalInternationalMountainNaga BabaNepalPashupati NathShiva Ratri
← Previous Story जापान जान एन–४ तहको भाषा जरूरी
Next Story → दुलहा आए, दाइजोमा १ रुपैयाँ लिए र हेलिकोप्टरमा दुलही राखेर बिदा भए